Vous êtes ici : Accueil GAZETIN'NY NOSY Sendikan’ny Mpitsara: Handraisan’ny fanjakana fepetra indray
Miteraka olana lehibe eo amin’ny fanjakana foibe sy ny SMM (Sendikan’ny Mpitsara Malagasy) ny raharaha Claudine Razaimamonjy. Hatramin’izao fotoana izao dia mizara roa tanteraka ny ao amin’ny fitsarana ao. Misy ny mpomba ity mpanolotsainan’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina ity. Misy kosa no tsy manaiky ny fitsabatsabahan’ny fanjakana amin’izany. Matetika no milaza ny heviny ny SMM ka mangataka ny fahaleovan-tenany tanteraka amin’ny fitsarana ity raharaha ity. Ny SMM sy ny Bianco (Birao mahaleo tena miady amin’ny kolikoly) no manahirana ny fanjakana mpitondra amin’izao fotoana izao, ka handraisana fanapahan-kevitra izao indray hono. Samy miady amin’ny fizakan-tenany tanteraka ireto sehatra roa ao amin’ny fitsarana ireto ka nampizarazara ny mpomba ny fitondrana amin’izao fotoana izao.
Manaraka akaiky ny raharaha Claudine Razaimamonjy ny SMM amin’izao fotoana izao ka tsy manaiky mihitsy ny tsindry ataon’ny fanjakana amin’ny hamoahana an’ity ramatoa ity. Ny fitsarana ambaratonga voalohany eto Antananarivo koa manara-maso akaiky ny fomba itanana an-dRazaimamonjy Claudine ao amin’ny hôpitaly HJRA ao. Tonga nijery na ao na tsy ao amin’ny hôpitaly ramatoa Claudine Razaimamonjy ny filohan’ny SMM no sady lefitra ny tonia mpampanoa lalàna Faniry Erinaivo araka ny andraikitra apetrakin’ny lalàna aminy, ary noho ny fahatsapany koa fa tsy maintsy iadiana ny kolikoly ny alatsinainy faha 15 may 2017.
Mahatsapa ny mpanaraka ny raharaham-pirenena fa miezaka mamerina ny hasin’ny fitsarana ity olona ity amin’izao fotoana izao. Miady amin’ny kolikoly amin’ny fahitana ny fihetsika ataon’izy ireo amin’izao fotoana izao. Momba azy noho izany ny vahoaka maro izay mahatsapa fa manomboka miady amin’ny tsy rariny sy ny kolikoly ary ny halatra avolenta eto amin’ny firenena izy ireo.
Mandeha ny feo ankehitriny fa handraisan’ny fanjakana fepetra ny SMM sy filoha lefitra ny mpampanoa lalàna fa manao ilay antsoina hoe « harcèlement » na fanakatsakanana amin’ny fomba tsy manara-penitra fa misy firehana amin’ity raharaha ity hono.
Izany indrindra no mahatonga ny ady hevitra ankehitriny satria raha ny mpitazana avy aty ivelany dia maro ny resaka mandeha amin’ny fitanana an-dramatoa Claudine Razaimamonjy ao amin’ny HJRA. Ny fanamarinana izany no tsy tian’ny fanjakana. Manao fangatahana amin’ny mpiandry varavarana ao amin’ny efitrano faha 125 sy 126 toa ny olona mangataka fihaonana amin’ny minisitra ireny ny olon-kafa mikasa ny hamangy na mpanao gazety hikaro-baovao ao amin’ny hôpitaly misy an’ity ramatoa ity. Ny tena mahagaga ho an’izay olona mandeha ao amin’ity toerana ity dia ny fahenoana olona miresaka mafy rehefa tsy misy mamangy. Mangina tampoka nefa izany raha vao misy olona hafa miditra. Ramatoa Claudine aza dia voalazan’ireo mpamangy ireo fa milombona ao anaty bodofotsy amin’izany, nefa dia fantatra izao ny feony izay miresaka tsara amin’ny olona miaraka aminy ao.
Inoana izany fa hisy ny sazy homena ity filohan’ny SMM ity sy ny namany toa ny nahazo ny mpiasan’ny IGE (Inspection générale des Impôts) telo mirahalahy izay namaky batsilana izao raharaha Claudine Razaimamonjy izao ? Dia mbola izany ihany ve no hataon’ny fanjakana ?
Mazava izany izao fa tsy mijery ny tombotsoam-pirenena sy ny vahoaka intsony ny fanjakana io raha toa ka manakantsakana ny ezaka ataon’ny SMM izao. Ny vahoaka aza dia mangataka ny fitsarana marina amin-kahalalahana tanteraka ny raharaha Bekasy, fakana olona an-keriny (kidnapping) ary ny mangarahara amin’ny “subvention exceptionnelle” izay vola nomena ho any amin’ny kaominina maro manerana ny nosy nefa fantatra fa misy fanodinkodinam-bola avolenta ataon’ny mpitondra amin’izao fotoana izao.